Uhlelo Lokudlulisela | Klever Ezezimali
Manje usungazuza nsuku zonke ngokubhekisela Klever kubangani bakho!
I-Update 4.2.4 yethula uhlelo olusha lokudlulisela lapho ungamema khona abangani bakho Klever Wallet futhi uthole kufikela ku-0.5% wawo wonke ukushintshanisa abangani bakho Klever Shintsha!
Kanjani Klever Imisebenzi Yokudluliswa
Ungathola kalula ikhodi yakho kumenyu Yezilungiselelo, lapho ungase ufinyelele khona kokuthi “Mema Abangane”
Thumela ikhodi yakho yokudlulisela kubangani bakho futhi Klever uzokhokha kuze kufike ku-0.5% wazo zonke izinguquko ezenziwa abangani bakho. Ukushintshaniswa kudinga ukuba ngaphezu kuka-$50 USD, lesi ukuphela kwesimiso sokuthi ukushintshwa kuvumeleke emiklomelweni yokudluliselwa.
Ungafuna umklomelo wakho ngokushesha nje lapho imiklomelo isifinyelela ku-1,000 KLV.